नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र – Page2– आनन्दको नेपालि मा दिर्घ हुँदैन
के तपाइले आँफुले आँफुलाइ हिन्दु भन्नुहुन्छ ? हिन्दु हुनुका गुण के के हुन?
मै आँफुले आँफैलाइ हिन्दु भन्न रुचाउँछु किनकि म हिन्दु परिवारमा जन्मे । हिन्दु परिवारमा जन्मनु बाहेक हिन्दु हुनुका अरु कुनै प्रमाण म संग छैनन । परिवारले सानै उमेरमा ब्रतबन्ध गरिदिएका थिए, त्यो पनि जवरजस्ति । त्यो बेला लगाएको जनै पनि अहिले मसंग छैन । टुप्पि पालेको छैन, योगिहरुले लगाउने जस्तो लंगौटि पनि कहिल्यै लगाएको छैन ।
त्यसो भए म हिन्दु हुनुको के प्रमाण भयो त ?
केहि छैन जस्तो लाग्यो।
आज एक ट्विटर मित्र, टंक खनालको प्रश्नले मलाइ सोच्न बाध्य पार्यो:
हिन्दु धर्म त भन्छौ कि हामी तर के हो यो धर्म भनेर कसरि बुझाउने हो हौ जिज्ञाशुलाई ??
मेरो उत्तर थियो – धर्म तेस्ता नियमहरुको संग्रहो हो जसले मानिसलाइ जिउन सजिलो बनाउँछ। त्यसका साथसाथै, मानिसले मान्ने धर्म अनुसार उसका मान्यताहरु, ब्यबहार र आदत बुझ्न पनि सजिलो बनाइदिन्छ। अरु धर्महरु जस्तै हिन्दु धर्म त्यस्तै नियमहरुको संगालो हो। यिनै नियमहरु सबै मानिसले सजिलोसंग बुझुन भनेर बिभिन्न धर्मग्रंथ र महाभारत र रामायण जस्ता कथाहरु लेखिएका हुन्छन।
टंकजिलाइ भने यि नियमहरु बुँदागत रुपमा नै चाहिएको रहेछ । बुंदागत रुपमा नै प्रस्तुत गर्न त सतहि सोचले मात्रै नमिल्ने हुनाले मैले “गितासार” लाइ आधार बनाउने सुझाव दिएको थिएँ । टंकजिले अन्य मित्रहरुको सुझावलाइ पनि आधार बनाएर बुँदागत रुपमा नै प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ यसरि:
१. ईश्वरमा बिश्वाश गर्दछ
२. ईश्वरको प्रतिमा स्थापनागरि पूजा आराधना गर्दछ
३. कर्ममा बिस्वाश राख्दछ
४. पुनर्जन्ममा बिश्वाश राख्दछ
५. आत्मा अमर हो भन्ने मान्दछ
६. मानवताको पालना गर्दछ
७. माता पिता गुरु अतिथिलाई देव/देवीको रुपमा हेर्दछ
८. वैदिक शाश्त्र अनुरुपका सस्कारको पालना गर्दछ
९. परम्परागत चाड पर्वहरु मनाउदछ
१०. देव/देवीको दर्शनार्थ तीर्थयात्रा गर्दछ
११. मृत शरीरलाई जलाउदछ
१२. गाईलाई पूजा गर्दछ र गौ हत्या अपराध मान्दछ
१३. सहअस्तित्व स्वीकार गर्दछ !!
Posted in चिन्तन	| Leaveacomment
प्रशुमा राइ को कविता “पेट”
Posted on November 8, 2017 by Anand
प्रशुमा राइ नयाँ युगकि कवयत्रिहुन । हालै काठमाण्डौमा भएको एक कविता प्रतियोगितामा प्रस्तुत भएको कविता “पेट”ले हाम्रो वास्तविकतालाइ प्रस्तुत गरेको छ । दुइ महिना अघि भएको प्रतियोगिताका बिजयि पाँच कवयत्रिहरुमध्ये प्रशुमा राइ एक हुन । युथ पोएट्रि स्ल्याम २०१७ (QC Award 2017) नाम दिइएको सो प्रतियोगिताका बिजयि अन्य चार कवियत्रिहरु थिए – यमन थापा, मानसि दहाल, कृति सिटौला र प्रज्ञा भण्डारि । अन्य कवयत्रिहरुको कविता भबिष्यमा शेयर गरौंला अहिले प्रशुमाको एक कविता:
अनि गुडिरहेका पेट
भर्खर जन्मिएका पेट
जन्मिन ठिक्क परेका पेट
र महत्वपुर्ण त, ब्युझिंरहेका पेट
यो बनावटका तवरले मोटा र दुब्ला लाग्ने पेटहरु नै हुन
आखिर जे गर्छ, यो पेटले गर्छ
र जे जे गर्दैछौं यो पेटको मागकै कारण
Posted in साहित्य / कला	| Leaveacomment
Posted on October 23, 2017 October 23, 2017 by Anand
सम्बन्ध राम्रो हुनु नै ठिक हुन्छ । तर, कसैलाइ होच्याउनु छ, सम्बन्ध बिगार्नका लागि यहाँ जम्मा गरिएका उखान टुक्का हरु नै पर्याप्त छन जस्तो मलाइ लाग्छ ।
नेपालि भाषा उखान टुक्काहरुको लागि धेरै नै धनि छ । तर, सबै उखान टुक्का राम्रा नै हुन्छन भन्ने चाँहि छैन । नेपालि समाज अनुसार नै भाषा बन्ने हुनाले कतिपय पुराना उखान टुक्काहरु सानो जातिलाइ होच्याउने खिज्याउने खालका छन । हुन त कतिपय उखान ठुला भनिएका जातिलाइ होच्याउने पनि छन । तेसैले साना ठुला सबै जातिले एक अर्कालाइ होच्याउन उखान टुक्का बनाउने गर्दा रहेछन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्ता उखान टुक्का प्रयोग गर्दा एक अर्का बिच बैमनष्यता बढ्ने र समाजलाइ नै बिखण्डित बनाउने खतरा हुन्छ । भै रहेका उखान टुक्कालाइ हटाउन वा मेटाउन त मिल्दैन तर तिनलाइ प्रयोग नगर्दा नै हामि बिचको सदभाव कायम रहने हुनाले यस्ता उखान प्रयोग नगर्न मेरो अनुरोध छ ।
ल हेर्नुस, प्रयोग गर्न नहुने तर चलनचल्तिमा नै रहेका केहि नेपालि उखान-टुक्काहरु (एक भन्दा बढि जात जाति, समुदाय वा अबस्तालाइ होच्याउने खालका) :
कुमाइको घुमाइ- पुर्वियाको जाल, गुरुङको बुद्धि- नेवारको काल (क्षेत्रिय बैमनष्य बढाउने, जात जातिलाइ होच्याउने उखान। यसमा सन्धर्व अनुकुल जुनसुकै जातको नाम राखेर भन्ने चलन छ। उदाहरणको रुपमा दोश्रो उखान पढनुहोला)
कुमाइको घुमाइ, जैसिको जाल, बाठोलाइ आपत, लाटालाइ काल (जातियता, अपांगता लाइ होच्याउने)
बाहुन बिग्रे मोज ले नेवार बिग्रे को भोज ले (जातिय बैमनष्यता बढाउने)
बाहुन मर्द खोलामा एक माना चामल झोलामा, भोटे मर्द डाडाँमा १ माना चामल भाढामा (जातिय बैमनष्यता बढाउने)
ज्यालामा नमिलेको कामी दमाइ जस्तो
बिष्ट घरमा बेलुका घर सल्लाह , कामीको घरमा बिहान सल्लाह
गिरि, पुरि, भारति, बन, यिनका दाजुभाइ अरु पनि छन
शेर्पा, तमाँङ, मिया, मुसल्मान, यिनि हुन आठ भाइ टुप्पी कट्टा बैमान
कामि-दमाइ माग्न जान्दैन, दाद-लुतो आउन जान्दैन
कालो बाहुन गोरो शुद्र, यिनिदेखि डराउँछन् महारुद्र
एक घर विष्ट दश घर कामि, जस्ता तिमि उस्तै हामि
दमाई-कामी बोलाई नुनको खति
नेवारको मुख चल्छ, थाक्सेको हात चल्छ
कुहिरे बाहुन, कैले खस, जुङ्गे मगर रस न बस
दमाइको थुक चोखो, बाहुनको मुख चोखो
Posted in समाज, भाषा र चालचलन	| 1 Comment
हुने वाला पत्नि र भु.पु. पत्निले अंगालो हाल्दा छवि मख्ख
Posted on October 17, 2017 by Anand
नायिका रेखा थापाले तिहार लक्षित गरेर रिलिज गर्न लागेको फिल्म ‘रुद्रप्रिया’को काग तिहारको अघिल्लो दिनमा राजधानीमा एक भब्य प्रिमियर गरिएको थियो । सो प्रिमियर रेखा फिल्म ब्यानरकै पहिलो प्रिमियर पनि भनिएको छ । प्रिमियरका बिशेश आकर्षण भएका थिए रेखाका पुर्वपति छविराज ओझा र उनकि हुनेवालि पत्नि शिल्पा पोखरेल। छविलाइ पुर्व पत्नि र हुनेवाला पत्नि दुबैजना संगै राखेर फोटो खिच्ने पत्रकारहरुको प्रयास सफल नभए पनि शिल्पाले भने रेखासंग बसेर फोटो खिचिन।
छवि र शिल्पा संगै आएको भए पनि क्यामेरा अगाडि एकसाथ तश्विर खिच्न भने यि दुइ तयार भएनन । छविले शिल्पालाइ छोडेर एकातिर लागे पछि उनि ‘रुद्रप्रिया’को प्रिमियरका लागि तयार पारिएको स्टेजतर्फ लागेकि थिइन । स्टेजमा रेखा र शिल्पाको बिचमा हास्य कलाकार हरिबंश बसेर फोटो खिचेर स्टेजबाट बाहिरिन लागेकि शिल्पालाइ एक फोटो एक पत्रकारले फेरि स्टेजमा फिर्ता पठाए रेखासंग फोटो खिच्नको लागि भनेर ।
मन नलागि नलागि खिचिएको भए पनि सो फोटोको लागि रेखा र शिल्पा मुस्काएका भने थिए । यसरि पुर्व पत्नि र हुनेवाला पत्निले एकसाथ फोटो खिचाउदा छविलाइ पनि स्टेजमा पठाउने प्रयास भने सफल भएन । आँफुले बनाएका यि दुइ हिरोइन शिल्पा र रेखाको अंकमालबाट छवि मख्ख देखिएका थिए ।
Posted in Artists, चलचित्र	| Leaveacomment
बिछट्टै अन्धि केटि (लघु कथा)
Posted on May 23, 2017 May 24, 2017 by Anand
एउटि अन्धि केटि थिइ । उसलाइ आँफु अन्धि भएकोमा साह्रै दुख लाग्थ्यो । अन्धि हुनुको कारणले उसलाइ आफ्नो जिवन नै दुखि लाग्थ्यो ।
अन्धि नै भए पनि उसलाइ बिछट्टै माया गर्ने एउटा केटो थियो । उसलाइ पनि आफ्नो प्रेमिको एकदमै माया लाग्थ्यो । अरु कसैले वास्ता नगर्दा पनि त्यो केटो सँधै साथै हुन्थ्यो । अरु कसैले उसको कुरा नसुन्दा पनि उ चाँहि मन दिएर सुनेर बस्थ्यो ।
एक दिन, त्यो केटिले केटोसंग भनि, “मैले संसार देख्न सक्ने भए, म तिमि संगै बिहे गर्थें ।”
संजोग पनि कस्तो भयो भने त्यो केटिलाइ कसैले आँखा दान दिए । अस्पतालमा उसको आँखाको अपरेशन भयो । आँखाबाट पट्टि हटे पछि उसले सबै चिज देख्ने भइ । संसारका सबै कुरा प्रष्ट देख्दा उ खुशिले गदगद भइ । आँखा देख्ने भए पछि त्यो केटिलाइ उसको प्रेमिले सोध्यो, “अब तिमि संसार देख्न सक्ने भयौ । अब त तिमि मसंग बिहे गर्छ्यौ नि, होइन ?”
उसले आफ्नो प्रेमि तर्फ हेरि । तर, आफ्नो प्रेमिलाइ देखे पछि भने उ साह्रै दुखि भइ । किनकि उसको प्रेमि त अन्धो पो रहेछ । उ सँधै आँफ्नै बारेमा मात्र सोच्ने हुनाले प्रेमि अन्धो भएको पनि चाल नै पाइनछ । सँधै अन्धो भएर बाँच्दा बाँच्दा आजित भएकि केटिलाइ आँखाको परेलि जोडिएको आफ्नो प्रेमि देख्दा छाँगाबाट खसे झैँ भयो ।
भर्खर आँखाको उज्यालो पाएकि केटिलाइ आँफ्नो जिन्दगि अन्धो प्रेमिसँग बिताउने कुराले खुवै पिरल्यो । उ आत्तिइ, डराइ र प्रश्न गरि, “भर्खर आँखा देखेकि छु, फेरि अन्धकारलाइ अँगालेर म कसरि बस्न सक्छु?”
केटिको कुराले सोझो प्रेमि माथि बज्रपात भो । उसको परेलि जोडिएको आँखाबाट आँशुका बलिन्द्र धारा बगे । उ त्यहाँ बाट लुसुक्क हिँड्यो ।
केहि दिन पछि केटिले एउटा चिठि पाइ, आफ्नो पुर्व-प्रेमिबाट।
चिठिमा लेखिएको थियो, “ति आँखाको जतन गरिदेउ है । किनकि ति तिम्रा हुनु भन्दा पहिले मेरा थिए ।”
Posted in साहित्य / कला	| Tagged story	| Leaveacomment
सगरमाथाको गहिराइ – नवराज पराजुलि
Posted on May 14, 2017 by Anand
यो कविता कान्तिपुरको “कोशेलि”मा फाल्गुन २९, २०७१ मा प्रकाशित भएको थियो । बिदेश जाने एक युवाको मन चोरेर लेखिएको यो कविता अहिले एकदमै चर्चित रहेको छ। प्रस्तुत छ, नवराज आँफैले वाचन गरेको यो कविता :
यो संसारको कुनै महान् चित्रकारलाइ
मेरो देशका गुराँससंग सापटी माग्नु
म त गुराँसको देशको मान्छे
यो कुरा पछि गरौंला कि
मैले खाने चामलको रङ किन्न
म आँफुचाहिं अरब आएको छु।
यो संसारको कुनै महान् परोपकारिलाइ
यो विश्व भरिकै फोहोर पखाल्न पुग्ने पानि चाहिए
मेरो देशका नदिहरुसँग सापटि माग्नु
म त नदिहरुको देशको मान्छे
Posted in साहित्य / कला	| Tagged poem	| Leaveacomment
कुन राशिका महिलाले कस्तो मेकअप गर्ने?
Posted on May 3, 2017 by Anand
मानिसहरुको जिवनमा केहि न केहि रुपमा बाह्य शक्तिको असर हुन्छ । जन्म समयमा खगोलिय शक्तिको असरका आधारमा मानिसको राशि निर्धारण गरिएको हुन्छ । यिनै राशिलाइ आधार बनाएर महिलाहरुले आफ्नो सुन्दरतामा अरु बढि निखार पनि ल्याउन सक्छन । प्रस्तुत छ – कुन राशिका महिलाले कसरि मेक अपगरेर अरु बढि सुन्दर हुन सक्छन भन्ने बारेमा चर्चा – यो चर्चा नागरिकको मासिक प्रकाशन परिवारमा प्रकाशित सामाग्रिलाइ आधार बनाएर तयार गरिएको हो ।
Posted in के किन कसरी	| Leaveacomment
Posted in चलचित्र	| Tagged Pooja Sharma, Prem Geet	| Leaveacomment
तपाइको बि.सं. २०७४ कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस, तपाइको राशिफल
Posted on April 21, 2017 April 22, 2017 by Anand
मलाइ राशिफलमा त्यति बिश्वास लाग्दैन । तर, राशिफल पढ्न भने रमाइलै लाग्छ । संसारमा भएका अरबौं मानिसहरुलाइ १२ भागमा बाँडेर तिनिहरुको भबिष्य बताउँदा ठ्याक्कै मिल्छ भनेर आशा गर्नु आँफैमा मुर्खता हो ।
न्वारनको नामको आधारमा राशिफल
ग्रह र नक्षत्रका कारण मानिसमा पर्ने प्रभावलाइ आधार बनाएर कुन ब्यक्ति कुन राशिमा पर्दछ भनेर गुरु पुरोहितले निर्धारण गर्ने गर्दछन । मानिसको जन्म लग्न, घडि पला आदि बिभिन्न हिसावकिताव गरेर न्वारनको नाम राखिने गरिन्छ, सोहि न्वारनको नामको पहिलो अक्षरको आधारमा राशि निर्धारण हुने गर्दछ ।
१२ राशिको राशिफल हेर्नुहोस :
न्वारनको नामको आधारमा राशिको साथ साथै नक्षत्र पनि निर्धारण हुन्छ । जस्तो कि न्वारनको नाम “चु”, “चे”, “चो” अथवा “ला” बाट शुरु भएमा सो ब्यक्तिको नक्षत्र अश्विणि हुन्छ । तेस्तै न्वारनको नाम “लु” वा “ले” वा “लो” वा “पो” बाट शुरु भएमा भरिणि नक्षत्र हुन्छ । अश्विनि र भरिणि नक्षत्र हुने सबै ब्यक्तिहरुको राशि भने मेष हुन्छ । यसरि न्वारनको नामको पहिलो अक्षरको आधारमा राशि निम्न प्रकार हुन्छ :
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, पो)
युट्युवबाट पैसा कमाउने दिन सकिएकै हुन त ?
झण्डै एक दशक देखि युट्युवले भिडियोमा देखिने बिज्ञापनको केहि भाग भिडियो निर्मातासंग बाँड्ने गरेको थियो । यसरि युट्युवमा भिडियो अपलोड गरेर धेरैले पैसा कमाए । तर, हालै युट्युवलाइ बिज्ञापन दिने बिज्ञापनदाताहरु युट्युवसंग रिसाएर बिज्ञापन दिन रोके पछि युट्युव ठुलो अफ्टेरोमा परेको थियो । यो प्रस्तुतिमा म चर्चा गर्नेछु –
बिज्ञापनदाताहरु युट्युवसंग किन रिसाए?
युट्युव ले के के नयाँ नियम ल्याएको छ ?
के युट्युवबाट अब कमाइ नहुने हो ?
तपाइँले बिगत केहि समयदेखि युट्युव हेर्ने गर्नुभएको भए थाह नै छ होला – आजकल अश्लिल भिडियो, झुक्याउने भिडियो लगाएत अनेक झुठा र सनसनि मच्चाउने खालका भिडियोहरुको बाढि नै आउन थालेको थियो । यि सबै भिडियोहरुको मुख्य उद्देश्य दर्शकलाइ नयाँ कुरा दिनु भन्दा पनि दर्शकलाइ झुक्याएर पैसा कमाउने मात्र हुन्थ्यो । यस्ता भिडियोहरुमा बिज्ञापन राखेर युट्युवले बदमासि गरिरहेको भन्ने बिज्ञापनदाताहरुले आरोप लगाइ रहेका थिए । तर, युट्युवले अहिलेसम्म उनिहरुको चासोलाइ बेवास्ता गरिरहेको थियो । Continue reading
Posted in Information	| Tagged youtube	| Leaveacomment